Paikady marketing amin'ny atiny 7 izay mitaona ny fahatokisana sy ny fizarana | Martech Zone
Alarobia 3, 2016 Alex Membrillo
Ny atiny sasany dia mirona hanao fampisehoana tsara kokoa noho ny hafa, mandresy fizarana bebe kokoa ary hiova fo bebe kokoa. Misy atiny vitsivitsy notsidihina sy nozaraina hatrany hatrany, nitondra olona vaovao hatrany amin'ny marikao. Amin'ny ankapobeny, ireo no singa maharesy lahatra ny olona fa ny marikao dia misy zavatra mendrika holazaina sy hafatra tian'izy ireo zaraina. Ahoana no ahafahanao mamboly fisian-tserasera mampiseho taratra ny soatoavina ahazoana fahatokisan'ny mpanjifa? Tsarovy ireto torolàlana ireto rehefa manamboatra ny paikadim-barotra amin'ny atiny ianao:
Asehoy ny fahaizanao
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa mety azy dia ny fampisehoana fa, raha misafidy anao izy ireo, dia ho eo am-pelatanany afaka. Mamorona atiny izay mampiseho fa fantatrao akaiky amin'ny indostriao ianao. Manorata lahatsoratra momba ny fomba fanao farany tsara indrindra. Azavao ny antony mahatonga ny metodolojika iray ho ambony noho ny iray hafa. Mamorona lahatsoratra lisitra mampiseho ny lesoka mahazatra sy ny fomba hisorohana azy ireo. Ireo karazana sombin-javatra ireo dia mampiseho ny fahatsinjovanao fa fantatrao izay lazainao ary azo itokisana ianao raha manao zavatra tsara ho azy ireo.
Mamorona atiny izay mamaly ny filan'ny mpamaky
Rehefa manomboka mijery ny atiny ao amin'ny tranokalanao ny olona, ​​dia matetika satria manana fanontaniana manokana izy ireo ka te hovaliana. Mamorona atiny afaka mamaly ny fanontanianao ary afaka manampy azy ireo hamantatra ny fomba hamahana ny olana mahazo azy ireo. Ohatra, azo inoana fa ny olona iray izay sendra olana amin'ny fifehezana azy dia mety hamaky bebe kokoa amin'ny antony iraisana hampiatoan'ny aircon ny fitsofana rivotra mangatsiaka alohan'ny hanandramany hisafidy ny orinasa HVAC hivoaka hanompo ny rafiny. . Amin'ny maha-olona anao mamaly ny fanontaniany dia naneho ny fahaizanao sy ny fahavononanao hanampy azy amin'ny olany.
Ny olona dia matoky kokoa ny marika iray izay manome valiny amin'ny fanontaniana mahazatra amin'ny fomba mahitsy sy mahasoa, nefa tsy manao ilay horonan-taratasy an-tsokosoko amin'ny votoatin'ny taonina hahitany ny kely ilainy fotsiny. Amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpanjifanao izay zavatra hitany ao amin'ny tranokalanao hitady azy ireo dia azonao inoana kokoa fa, raha mila vokatra na serivisy izy ireo dia ny anao no safidiny.
Aza milaza azy ireo fotsiny; Asehoy Ireo
Hamarino tsara fa afaka mamerina ny fitakiana lazainao ianao. Ohatra, aza milaza fotsiny fa manana ny taha mahaliana indrindra amin'ny faritra misy anao ianao. Mamorona tabilao na infographic izay mampitaha ny isa azonao amin'ny mpifaninana aminao. Avereno am-bava ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa ambony amin'ny teny nalaina avy tamin'ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpanjifa faly. Ny fanambarana tsy misy na inona na inona manohana azy dia mety tsy raharahina na, ratsy kokoa, hahatonga ny mpamaky hiahiahy. Raha afaka manohana ny fanambarana rehetra apetrakao amin'ny porofo ianao, dia maneho fa manao ny marina ianao ary mendrika ny atokisan'izy ireo sy ny orinasany.
Asehoy ny mpamaky mihaino anao
Ny haino aman-jery an-tserasera dia voajanahary ara-tsosialy. Isika rehetra dia manana ny boaty savony, na vondron'olona an'arivony na vondron'olona sy namana vitsivitsy ny mpihaino antsika. Rehefa mandefa Internet ianao dia manao resadresaka. Asehoy ny vinavinanao sy ny mpanjifanao izay henoinao ary koa rehefa miteny ianao.
Araho maso ny fantsom-piarahamoninao raha miresaka momba ny marikao ianao. Vakio ireo hevitra ao amin'ny bilaoginao. Jereo hoe faly amin'ny inona ny olona ary, ny tena zava-dehibe, ny tsy izy. Rehefa mety ny manao izany dia alefaso amin'ny bilaoginao na amin'ny fantsona tambajotra sosialinao ny ahiahin'ireo mpanjifa. Rehefa hitan'ny olona fa mamaly ny marika iray dia mety hahatsapa ho azo antoka kokoa izy ireo amin'ny fanankinana izany marika izany amin'ny orinasany.
Ampahafantaro ny porofo ara-tsosialy
Rehefa hitantsika fa ny hafa, na olona fantatsika manokana na tsia, dia nanana traikefa tsara tamin'ny marika iray, dia azo inoana kokoa fa hatoky ny tenin'izy ireo isika noho ny filazan'ny marika azy manokana. Amporisiho ny mpampiasa handao ny hevitra ary hanonona izany ao amin'ny atiny rehefa mety izany. Ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanjifa tena izy ireo dia mety hahatonga ny hafa hahatsapa ho mahazo aina kokoa rehefa milentika sy manao orinasa miaraka amin'ny marikao.
BuzzSumo dia nandinika Lahatsoratra malaza indrindra tamin'ny 2015 amin'ny tambajotra izay misy Twitter, Facebook, ary LinkedIn. Ary ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ireo izay misy singa mampihetsi-po. Ny olona dia nihetsi-po tsara tamin'ny lahatsoratra izay nahitana tantara nahafaly sy tsara momba ny olona. Mety hizara tantara mampiady hevitra na manaitra amin'ny fomba hafa koa izy ireo.
Rehefa mamorona atiny ho an'ny orinasanao dia eritrereto ny mety ho fahatsapan'ny tolotra manokana ny mpamaky anao. Mety hahaliana azy ireo ve izany? Hifandray amin'ny olona amin'ny tantara ve izy ireo? Ireo karazana fanehoan-kevitra ireo dia mahatonga ny fanoloran-kevitrao atolotra hahatsapa ho misy ifandraisany sy manokana. Ireo no karazana tantara izay mety hahazo hevitra sy fizarana.
Miasa amin'ny mpanjifa tsirairay na orinasa kely ve ny marikao? Misy mpanjifa ve milaza fa ny vokatrao na serivisinao dia nahasoa azy ireo tamin'ny fomba lehibe? Manana mpanjifa izay miavaka amin'ny zony manokana ve ianao? Diniho ny famoronana atiny video na bilaogy momba ny tantaran'ireo mpanjifa ireo. Ny fifantohana amin'ny olona iray dia manome olona olona hifandraisany. Tsy voatery hahita ny vokatrao amin'ny fiainanao izy ireo raha manome lisitry ny endri-javatra fotsiny izy ireo. Amin'ny fampisehoana ny fomba nanampiany na nanatsarana ny andavanandrom-piainan'ny olona iray, azonao atao ny manampy ny mpanjifanao hahita ny fomba mahasoa azy ireo ny vokatrao.
Rehefa zaraina ny atiny dia ataonao eo alohan'ny mpanjifa mety tsy nahita izany ny marikao. Ary, azonao ny porofo ara-tsosialy izay avy amin'ny tolo-kevitra manokana. Ny ankamaroan'ny olona dia mahay manavaka tokoa raha ny momba ny atiny nozarainy. Rehefa dinihina tokoa, io fizarana io dia fanamafisana tsy azo lavina ny zavatra atin'ny atiny. Amin'ny famoronana votoaty izay manetsika ny fahalianana sy ny fihetsem-po eo am-panehoana fa mendrika ny hisarika ny sain'izy ireo sy ny fahatokisan'izy ireo ny marikao dia azonao atao ny mampitombo ny anjaranao, manangana fifandraisana matanjaka ary mahita ny tombotsoan'ny atiny niova fo.
Tags: Content Marketingfizarana atinyfihetseham-pofahaizanymampitombo ny fizarana ara-tsosialymampitombo fitokisanamitaona fahatokisanamihainomanokanaanjaraasehoy azy ireoporofo ara-tsosialylazao aminyfahatokiana
Alex Membrillo no CEO an'ny Vahaolana amin'ny kardinaly, masoivohom-barotra nomerika nahazo loka tany Atlanta, GA. Marked nomerika an'ny Fikambanan'ny Teknolojia any Georgia (TAG) tamin'ny taona 2015, ny fomba fanaony amin'ny marketing dizitaly dia nanova ny indostria ary nanome valiny miavaka amin'ireo mpanjifa amin'ny habe sy tsena rehetra. Nomena anarana in-3 nifanesy tao amin'ny lisitry ny orinasa 5000 mitombo haingana indrindra any Etazonia i Cardinal.
Scoutsee: manaova tombony ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny fivarotanao Affiliate